Na-agba ọsọ na Andorra: ọdụ ụgbọ elu atọ na ihu igwe dị mma | Akụkọ Njem
Kigba ọsọ na Andorra
Louis Martinez | | Andorra, Getaways Europe
Ọtụtụ mmadụ na-eme njem kwa afọ ịgba ọsọ na Andorra. Ihe ùgwù nke ọnọdụ a obere ala na Ugwu Pyrenees na nkezi elu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mita abụọ na-eme ka ọ bụrụ ebe zuru oke maka ụdị dị iche iche egwuregwu oyi dị ka snowboarding, sledding ma ọ bụ na-agba ski n'onwe ya na ọdịiche ya niile.
Ọ bụrụ na nke a anyị tinye a ọdịdị magburu onwe ya, ezigbo ihe nketa nke Ihe ncheta Romanesque na ihe owuwu nke jisiri ike chekwaa ọdịnala, anyị nwere ebe kachasị mma iji nwee ezumike ụbọchị ole na ole. Na mgbakwunye na ịgba ọsọ na Andorra, ị nwekwara ike iji ohere ị gara ịzụ ahịa maka ngwaahịa ndị dị ọnụ ala na obere isi. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-elekwasị anya na ịkọwa ebe ị nwere ike ịme egwuregwu kachasị amasị gị.
1 Ebe ntụrụndụ atọ dị na Andorra
1.1 Nna nna m
1.4 Ebe ndị ọzọ ị ga-egwu ski na Andorra
2 Kedu ọnwa kacha mma iji ghaa ski na Andorra?
3 Otu esi aga Andorra
Ebe ntụrụndụ atọ dị na Andorra
Uwe ojii na-acha ọcha na-ekpuchi Onye isi nke Andorra n'oge oyi. Nke a sụgharịrị ịbụ ihe karịrị narị kilomita atọ nke ugwu skai gbasaa n’elu ọdụ atọ nwere ọrụ ndị ọzọ niile dịka ebe obibi, ụlọ nri na ebe ị ga-adọba ụgbọ gị. Ka anyi mata ha.
Nna nna m
Ọ bụ ya kachasị ukwuu na obere steeti yana na mpaghara Iberian Peninsula dum. Ga-ahụ ya n’ugwu ndị mejupụtara ya Ndagwurugwu Valira na o nwere 138 egwu na ọnụ nwere ndọtị nke 210 kilomita. E kewara ya na ngalaba asaa: Soldeu, Canillo, Pas de la Casa, Encamp, Peretol, El Tarter na Grau Roig.
Ọtụtụ mezue oge ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ na ụlọ nri, nurseries na ụzọ gasị maka ụmụaka, ebe ndoputa na ebe mgbazinye ihe onwunwe. Oge ha na-amalite na mbido ọnwa Disemba wee kwụsị n’etiti ọnwa Eprel. Agbanyeghị, ihu igwe na-ekwe, ọ ga-emeghe ruo May.
Jiri ohere ị gara na Grandvalira mara nke a Chọọchị Romanesque nke Sant Joan de Caselles, nke ebe nsọ nke Nwanyị Nwanyị nke Meritxell, nchebe dị nsọ nke Andorra na oké nkume osise nke Bronze Age emi odude ke Roc de les Bruixes.
Obere karịa nke gara aga, ọ nwere kilomita 63 nke mkpọda nke ga-enye gị ohere ịme ọ bụghị naanị ụdị ịgba ọsọ dị iche iche, kamakwa snowboarding na egwuregwu ndị ọzọ snow. Ga-ahụ ya na Ndagwurugwu La Massana ma kewara ya na uzo abuo: Pal na Arinsal, nke ejikoro a Cableway site na nke ị ga-ahụ oke ala Pyrenees.
Ọ na-enyekwa gị ụlọ nkwari akụ, ụlọ nri na ebe ụmụaka. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na gị na ndị na-amaghị otú e si egwu ski eme njem, ọ na-enye ha usoro mmemme maka ha. Ọmụmaatụ, snowmobiling ma ọ bụ hiking ụzọ ụkwụ.
Ọdụ ahụ na-anọgide emeghe niile n'afọ. Site na December ka Eprel na skai na site na Mee ruo Ọktọba mee ugwu ndị ọzọ egwuregwu mgbe ịga ebe ndị mara mma na La Massana dị ka Romanesque ụka San Clemente ma ọ bụ Casa Rull Ethnographic Museum.
Site na kilomita 30,5 nke ugwu, ọ bụ obere ọdụ ụgbọ mmiri kacha mma na Andorra. Otú ọ dị, nghazi ya n'ebe ugwu na-enye a magburu onwe ya mma snow. Na mgbakwunye, ọ na-ahazi asọmpi ski-mba ọ bụla kwa afọ, nke mere ka ama ya na Europe dum.
Stationlọ ọrụ ahụ meghere ọha na eze na Disemba ma mechie ụlọ ọrụ ya na njedebe nke Eprel. Dị ka ndị gara aga, ọ na-enyekwa ebe obibi na ụlọ nri na nkasi obi niile.
I nwekwara ike iji ohere nke nleta gị na Ordino mara nke a Eska Romanesque nke San Martín de la Cortinada, na Baroque uka nke Casa Rosell na ndị na-achọ ịmata ihe Ebe Areny-Plandolit House Museum, ebe ị ga-ahụ ihe ndụ dịịrị ezinụlọ nwere oke okike na mpaghara na narị afọ nke XNUMX na ụfọdụ ubi mara mma.
Ebe ndị ọzọ ị ga-egwu ski na Andorra
Tinyere ọdụ ụgbọ atọ ndị a, steeti obere peninsular ahụ nwere ebe abụọ ọzọ maka ịgba ọsọ. Uzo snow nke Ndị Rabassa Ọ dị na gburugburu ebe obibi nke Naturland na ezubere maka ịgafe mba na ịgba ọsọ snow. Iji mee nke a, ọ na-enye gị mkpokọta kilomita 15 nke mkpọda.
N'aka nke ọzọ, The Cannaro Ọ bụ mpaghara nwere mkpọda maka ndị mbido. N'akụkụ ha, o nwere ụlọ akwụkwọ ski na snowboard. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọghị ski, ọ nwekwara ụlọ nri na ụlọ mmanya na mbara ala yana ụlọ nkwari akụ.
Kedu ọnwa kacha mma iji ghaa ski na Andorra?
Ihu igwe na Andorra bụ nke ụdị ugwu ugwu. Ya mere wintter bụ oyi, na ọnọdụ okpomọkụ nke na-adị mfe nfe n'okpuru ogo ogo. Ọdịda n'ụdị snow dịkwa oke oge, nke bara uru mgbe niile maka ebe a na-eme ski nwere ọnọdụ dị mma.
Maka ebumnuche ndị a niile, ọnwa kachasị mma ị ga-eji ski na Andorra bụ February. Snoo ahụ bara ụba ma dị mma karịa. I nwekwara ike ịga mbubreyo Jenụwarị. Agbanyeghị, buru n'uche na ụbọchị ndị a na-ahụta ka ndị nnukwu oge na mpaghara ya mere na ahịa nwere ike ịbụ dịtụ ọnụ.
Otu esi aga Andorra
Ebe ọ bụ na ị ga-aga Andorra na ski, ị ga-eweta akụrụngwa gị yana ụzọ kachasị mma iji mee ya bụ n'ụgbọala gị. Accesszọ nnweta si Spain bụ N-145, nke na-abanye obere steeti site na ndịda.
Mgbe e mesịrị, na Andorra la Vieja, na NG-3 Ọ ga-akpọrọ gị ma Vallnord na Ordino. Kama, iji ruo Grandvalira ị ga-agbaso ụzọ ahụ NG-2.
Andorra nke Ochie
N'aka nke ọzọ, steeti Pyrenean enweghị ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Yabụ, nhọrọ ọzọ ị ga-aga ski na Andorra bụ ụgbọ ala. Have nwere ahịrị oge niile site na isi obodo Catalan yana n'obodo ndị ọzọ. Ha rutere na isi obodo Andorran, nke pụtara na mgbe e mesịrị, ị ga-aga ebe ntụrụndụ ski.
Otú ọ dị, ndị a nwekwara njikọ na Andorra la Vieja site na iche ahịrị bọs, ụfọdụ n'ime ha bụ n'efu. Na mgbakwunye, site na La Massana ị nwere Cableway nke anyị kọọrọ gị ya na nke a ga - akpọga gị na Pal Arinsal.
Na mmechi, ị na-egwu ski Andorra ọ dị ịtụnanya n’ezie. Obere ala Pyrenean nwere agwa niile iji mee ya: oge ​​atọ mara mma, snow bara ụba ma dịkwa mma yana akụrụngwa mara mma maka ụlọ na ụlọ nri. Ọ bụrụ na ị na-amasị ski, egbula ịga Andorra.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Kigba ọsọ na Andorra
Agwaetiti La Graciosa